Kugxekwe uZodwa Wabantu ngolimi oluqosheme | News24
Kugxekwe uZodwa Wabantu ngolimi oluqosheme
Johannesburg - Isikhulu sesitebele i-Afrotainment uMthokozisi "DJ Tira" Khathi sesibhule umlilo ngemuva kokugxekwa kukaZodwa Wabantu ezinkundleni zokuxhumana ngendlela akhuluma ngayo.
UZodwa uzifake obishini ngemuva kokusabalalisa i-video yakhe adlulisa kuyo inkulumo ezinkundleni zokuxhumana ngamaholidi kaKhisimusi.
Kwi-video uZodwa utshela abantu besifazane ukuthi kufanele basebenzise imizimba yabo ukuthola imali.
"Amadoda asithanda sinje, sinqunu, senza ucansi ebusuku futhi simnandi!. Sebenzisa i** yakho. Lokhu kungamandla akho. Ngichaze ukuthi, angikwazi nokudansa kodwa ngithola imali engu-R35 000 uma ngiqashiwe. Ngakho-ke zi**** ezinye, ibani inina, ningashintshi...," kusho uZodwa.
Ngemuva kokuthola inqwaba yezikhalo, uTira ubize umhlangano noZodwa ukudingida ngenqubekela phambili.
"Siqeda ukuba nomhlangano omncane ngoba sesizizwile izikhalo zenu, ikakhulukazi ezinkundleni zokuxhumana, ukuthi uZodwa unolimi oluqosheme."
UTira uthe unethemba lokuthi uZodwa uzoshintsha indlela akhuluma ngayo okanye akukhulumayo kube yinto eyakhayo.
"Ngo-2018 uZodwa Wabantu uzoshintsha ulimi kodwa angeke ngishintshe, usazothola yena loZodwa omaziyo, akayindawo. Nisazomubona komabonakude benu, ngiyabonga kakhulu ngothando nokungeseka kwenu. Ngiyazi ukuthi ngiveza ngendlela ehlukile kodwa ngiyabonga kakhulu," kusho uZodwa.
Nakuba uZodwa engenawo amahloni ngezinkulumo zakhe kodwa uzwakale ewumuntu ozisolayo ngale video yakamuva.
UZodwa ngaphambilini watshela iTshisaLive ukuthi ukhululekile ukusho noma yini ngoba akekho ongaphezu kwakhe.
Zodwa Wabantu ???? pic.twitter.com/eGsJgx7kxm